Kayseri 150 ။ အကောင်အထည်ဖော်နှင့်တစ်နှစ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့စီမံကိန်းနှင့်အတူ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 KayseriKayseri 150 ။ စီမံကိန်းနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်နှင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့
Kayseri 150 ။ စီမံကိန်းနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်နှင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့
09 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
စီမံကိန်းများအဖြစ်ကူးမြောက်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်သည့် Kayseri ၏နှစျတှငျ
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Mamdouh Büyükkılıç'ın, 150 ၏မြို့တော်။ ခုနှစ်သည်စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုပေး၏။ Melikgazi အဆိုပါ Airlift, Kocasinan အတွက်နိုင်ငံများအသင်း Keykubad ၏ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့ထို့အပြင် Mobilyakent Belsize 6.5 ကီလိုမီတာလမ်းကနေတိုးချဲ့လည်းအသစ်တစ်ခုကိုရထားလမ်းစနစ်ကတည်ဆောက်ကြမည် '', Büyükkılıçနိုင်ငံတော်သမ္မတဖော်ပြ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ 150 ။ တစ်နှစ်တာစီမံကိန်းများ, ငါတို့တူရကီထံမှထောက်ခံမှုရတဲ့နေ, '' ဟု၎င်းကပြောသည်။
မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, ပထမဦးဆုံး AK ပါတီပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌကစီစဉ်မြို့တော်ဝန်အစည်းအဝေးဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Mamdouh Büyükkılıç'ınထိုကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးများ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့နှင့်သွေးစည်းညီညွတ်မှု၏စုပေါင်းစိတ်တွင်ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေး၏တိုင်ပင်ဆွေးနွေး, တူရကီအတွက်န်ကြီးဌာန၌သူ၏ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükkılıç, သူတို့သည်မြို့နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများပေါ်မှာရှိသမျှဝန်ကြီးဌာနများ၏ထောက်ခံမှုရရှိထားပြီဟုဆိုသည်။
Won Greater SPEED စီမံကိန်းများ
မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, ထို့နောက်မြို့တော်ဝန်ဟာ AK ပါတီ Tala ခရိုင်အကြံပေးကောင်စီအစည်းအဝေးမြို့တော်မြူနီစီပယ် 150 များ၏အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခြင်း။ တစ်နှစ်တာလွန်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်သည့်စီမံကိန်းအကြောင်းတင်ဆက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Mamdouh Airlift "Air Supply နိုင်ငံများအသင်းဥယျာဉ် Kayseri တစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုခံထိုက်သောသူနဲ့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်, အမျိုးသားဥယျာဉ် Buyukkilic ၏တင်ပြချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ပြုမိစီမံကိန်း gone've အကြောင်းကိုတူရကီနှင့်အတူလိုအပ်သောဆွေးနွေးညှိနှိုင်း, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
သူတို့ Airlift နိုင်ငံများအသင်းဥယျာဉ် Keykubad နိုင်ငံများအသင်းအဖြစ်အစီအစဉ်၏ဥယျာဉ်ကိုဆောင်ခဲ့သောသူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သမ္မတBüyükkılıçနှင့်အတူတူရကီအတွက်စီမံကိန်းဝန်ကြီး၏ရလဒ်များကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükkılıç, အ Airlift အတွက် Melikgazi, Kocasinan Keykubad ကိုလည်းလူမြိုးတစျမြိုးဥယျာဉ်၏အလိုတော်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükkılıçကိုလည်းအသစ်ကရထားလမ်းလိုင်းများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များကို "ကနိုင်ငံတော်သမ္မတစနစ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုသို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ Belsize ထံမှ Mobilyakent 6,8 ကီလိုမီတာရထားလမ်းကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ငါမျှဝေသူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးဌာနတင်ဒါလိုအပ်သောအလုပ်စတင်ဖြန်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Tala အတွက်အမိမြေလိုင်းများ၏နူးညံ့သောကျွန်ုပ်တို့ပြုလိမ့်မည်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုလည်းလျှင်မြန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Sahabiye မြို့ပြသက်တမ်းတိုးစီမံကိန်းကိုလျှင်မြန်စွာကြောင်းနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူBüyükkılıçနှင့်အတူစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု၏ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတအတွက်တတိယ application များအတွက် ယူ. , Beydegirmeni ကိုလည်းမွေးမြူရေးနှင့်တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခရိုင်အပေါ်သူတို့နှင့်အတူလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည်ယူပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အရှိန်မြှင့်ကပြောသည်။
မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ınဤစီမံကိန်းအဖြစ် Yuksel မီးသူတို့ abled သားသမီးရဲ့အိမ်မှာဖွင့်လှစ်, Mustafa သဲသက်ကြီးရွယ်အိုများအားနေထိုင်မှုရေးစင်တာသည်နှင့်အတားအဆီး-အခမဲ့နေထိုင်မှု Center က Drive ကိုအစာရှောင်ခြင်းဆောက်လုပ်ရေး, Beyazşehirသူတို့ကလူမှုဘဝကရေးစင်တာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သူတို့စာကြည့်တိုက်နောက်ဆုံးကြမ်းပြင် convert, သူတို့ Inonu Park က, အ Hulusi ပြန်စီ 15 ဇူလိုင်လလမ်းနှင့်အတူသွင်း Boulevard သူတို့ trifoliate ထပ်တိုက်လမ်းဆုံရှေ့တွင်ပြီးစီးခဲ့သောလမ်းဆုံမှာလမ်းဆုံအစီအစဉ်နှင့်တံတားအလုပ်, စီးတီးဆေးရုံတွင် ပြု. ထိုသူတို့အလုပ်၏စတုတ္ထအရွက်စတင်ခဲ့တဲ့လူကူးသည့်မြေပေါ်၏ပြီးစီးအဆင့်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အဓိက Boulevard ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်ကိုယူသကဲ့သို့, Erciyes အမြင့်မြင့်စခန်းစင်တာနှစ်ခုလယ်ကွင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေး နှင့်ဤသူတို့သည်လည်းခဲယဉ်း Kayseri, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်စေ, သူတို့ 10 လိမ့်မည်အရေအတွက်စတင် သူကစကားလုံးနှစ်လုံးကိုချစ်၏။
အရင်းအမြစ်: Kayseri သတင်းများ
Schneider လျှပ်စစ် | မီးရထားအကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့အများကြီးစီမံကိန်းများကိုရှိပါတယ် 26 / 02 / 2014 အကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့အများကြီးစီမံကိန်းများကိုရှိပါတယ် Railways: Schneider လျှပ်စစ်, mAlArlA ကကဏ္ဍက၎င်း၏ပြောဆိုချက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်ရထားလမ်းစနစ်များကိုဝယ်ယူရရှိခဲ့သည်။ Schneider လျှပ်စစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရောင်း Manager ကို Can Ceylan; "ဒီစျေးကွက်ရထားလမ်းအကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့အများကြီးစီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည်အလွန်ကြီးမားသည်။ ကျွန်တော်သစ်ကိုဓာတ်အားခွဲရုံဖွစျဖို့မြျှောလငျ့ထားတဲ့ကြမ်းတမ်းခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ 200-250 တဦးတည်း "ဟုသူကပြောပါတယ်။ Schneider လျှပ်စစ်နောက်ဆုံးတော့တူရကီက Metro စီမံကိန်းကို M3 နှင့် M2 လိုင်း၌သူ၏အလုပ်ကိုနာမည်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီတူရကီအတွက်ဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းတွေမှနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်လုပ်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ site ကိုမှလွှဲပြောင်းပူဇော်ကြောင်းစနစ်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဖို့စတင်နေသော်လည်းမကြာသေးမီရထားလမ်း။ Schneider လျှပ်စစ် ... Can Ceylan နှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရောင်း Manager ကို
သဘောပေါက်ဖို့ Artvin အတွက်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို 08 / 08 / 2012 Artvin အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့စာနယ်ဇင်းရုံးနှင့် Artvin ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးအားဖြင့် Artvin အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Necmettin Shield ကို၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ကလုပ်စာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အရှေ့ပင်လယ်နက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (DOKA) တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုလှုပ်ရှားမှုများအောက်တွင်ထောက်ခံမှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် Artvin Ropeway စီမံကိန်း, တင်ပြခဲ့သည် ဒါဟာကဆိုသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည်ပါတီများအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးယင်း DOKA ၏ပစ်လွှတ်စီမံကိန်းများကိုတင်သွင်းကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ကြေငြာချက်ထဲမှာသဘောတူညီချက်နှင့်စီမံကိန်းများ၏ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို3လကြာချိန်ပေးရန်, ကဖြစ်နိုင်ခြေ၏သဘောသဘာဝနှင့်လိုအပ်သောစမ်းသပ်မှုများနှင့် Cartographic အပြောင်းအလဲနဲ့စီမံကိန်းဇုံအစီအစဉ်ပြင်ဆင်ချက်၏ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာမှု, EIA ကိုမိတ်ဆက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအောင် ကလှုပ်ရှားမှုများသတ်မှတ်ချက်များ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်သူကအလေးပေးခဲ့ပါတယ်။ ကြေညာချက်မှာတော့ Artvin နှင့် ...
Metro 2,5 ဘီလီယံကို TL ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောပေါက်နှင့်အတူ Gebze ပါလိမ့်မယ် 05 / 10 / 2017 Gebze အတွက် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်အာဗြဟံသည်Karaosmanoğluမြေအောက်ရထားစီမံကိန်းအကြောင်းမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ Gebze နိုင်ငံတော်သမ္မတKaraosmanoğlu၏မြို့အတွက်ရင်ပြင်မြေအောက်ရထားဘူတာရုံမြို့ထဲမှာကြီးထွားလာကျနော်တို့သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်သည်လူဦးရေကိုကြည့်ပါ "လယ်ပြင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှာစကားပြော။ ဤသည်ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာများတစ်ခုတိုးလာစေမည်။ Gebze လူဦးရေ 15 နှစ်ပေါင်း2ကြမ်းပြင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သာယာဝပြောတိုင်းအလုပ်ခွင်ကြီးထွားလာသည်ပြဿနာတစ်ခုမော်တော်ယာဉ်ထက်ပိုပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်အရေအတွက်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ထုံးစံ၌တိုးပွားလာနေသည်။ ဒါပေမယ့်လမ်းများအတူတူပင်အရွယ်အစားရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆယ်စုနှစ်အလုပ်လုပ်ပြီ "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုÇayırovaမြို့တော်ဝန် Alexis စမစ်နှင့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Ilhan Bayram ပါဝင်မှုပြသခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း 32 ...
ယင်းအလေ့အကျင့် Ropeway စီမံကိန်းမှ Sapanca ခရီးသွားလာရေးပံ့ပိုးပေးခြင်းကိုပေးတော်မူမည် 06 / 10 / 2018 Sapanca မြို့တော်ဝန် Assoc ။ ဒေါက်တာ Aydin Yılmazer, cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းသည်ခရိုင်ထဲကယူသွားပါလိမ့်မည်အကြောင်းကိုမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ပရောဂျက်၏ပြင်ဆင်မှုကိုညွှန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတYılmazer, သူတို့ကအဆိုးမြင်စိတ်တွေပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ကေဘယ်လ်ကားဘူတာရုံ၌ရှိသမျှသောအသေးစိတျရှည်ဖို့စီစဉ်ထားကဆိုသည်။ အဆိုပါခရိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၏ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုအမြတ် "ကျနော်တို့ကဒီစီမံကိန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့၏ကျက်သရေတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာအကောင်အထည်ဖော်ကြတဲ့စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတYılmazerကယ်တင်လိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီရုံ cable ကိုကားများမဟုတ်။ အထက်ပါ5နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့လူမှုအဆောက်အဦများတွင်ဧက type field ကို 70 လစာအတွက်ငှားရမ်းခတစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုနှင့် တွဲဖက်. အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ ယင်းကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို လူမျိုး၏စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တို့သည်ကြီးစွာသောအနိုင်ရရှိပေးသွားမှာပါ "ဟုသူကပြောသည်။ စီမံကိန်းပြင်ဆင်မှု, အလေ့အကျင့် ...
Belsin Mobilyakent ရထားလမ်း
150 ၏ Kayseri ။ တစ်နှစ်တာစီမံကိန်းများ
အမိမြေ Tala ရထားလိုင်း
Schneider လျှပ်စစ် | မီးရထားအကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့အများကြီးစီမံကိန်းများကိုရှိပါတယ်
သဘောပေါက်ဖို့ Artvin အတွက်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို
Metro 2,5 ဘီလီယံကို TL ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောပေါက်နှင့်အတူ Gebze ပါလိမ့်မယ်
ယင်းအလေ့အကျင့် Ropeway စီမံကိန်းမှ Sapanca ခရီးသွားလာရေးပံ့ပိုးပေးခြင်းကိုပေးတော်မူမည်
AK ပါတီ Kayseri လက်ထောက် Yasar Southwind Kayseri "အထိတိုးချဲ့တံ့သောမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာရှိကြောင်း။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 598 150 DSI ဒေသဆိုင်ရာKarşısiမြေပေါ်Yaptırılacaktırအတွက် Kayseri-Sivas kmxnumx +